Maraoka: Tetikasa Zotran-dalamby TGV Vita Frantsay Miteraka Resabe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Oktobra 2011 2:52 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Español, bahasa Indonesia, 繁體中文, 简体中文, English
Ny Alakamisy 29 Septambra 2011, nitsidika an'i Maraoka ny Filoha Frantsay Sarkozy mba hanotrona ny fanombohana ny asa fanorenana zotram-piarandalamby TGV mampitohy ireo tanàna ao Tangier sy Casablanca. Ity fiarandalamby haingam-pandeha vita frantsay ity dia tokony hanomboka hisosa amin'ny Desambra 2015 ary mitontaly 20 lavitrisa dirhams (US$2.4 lavitrisa) ny vivavinam-pandaniana aminy.
Ny masoivohom-baovaom-panjakana Maraokana M.A.P. dia nidehaka hoe “i Maraoka no firenena voalohany indrindra aty Afrika sy amin'ny tany Arabo hanana fitaterana an-dalamby raitra sy araka ny haitao avo lenta toy izany“
Nandritra ny lanonana, teo ambany fiahian'ny mpanjakan'i Maraoka Mohammed VI sy ny Filoha Sarkozy, ny Minisitry ny Fitaterana Maraokana, Karim Ghellab dia nanazava fa ny TGV dia andrasana hiteraka asa vaovao sy ho seha-piofanana momba ny asa amin'ny fitaterana an-dalamby ho an'ireo Maraokana mitady asa.
Ilay bilaogera Maraokana anti-panahy, Larbi, dia mihetsika manohitra ilay “heloka bevava ara-toekarena”. Azavainy fa ilay fifanarahana dia tampi-maso nomena an'i Sarkozy tany amin'ny faramparan'ny taona 2007 tany mba ho fanambatambazana ny Frantsay noho ny tsy nahazoan-dry zareo ny fifanarahana varotra fitaovam-piadiana, nitentina volabe, nanoloana ny Amerikana. Tamin'izany fotoana, ny governemanta Maraokana dia nifidy ny fiaramanidina mpiady Lockheed Martin F-16 avy any Etazonia nanoloana ny fiaramanidina mpiady frantsay Dassault Rafales.
Ny fitsidihan'i Sarkozy tao Maraoka dia nitranga indrindra tao anatin'ny fotoana izay isian'ny adihevitra lehibe ao amin'ny firenena, momba ny fanavaozana demoakratika nentin'ny Lohataona Arabo, natosik'ireo hetsi-panoherana am-pilaminana teny an-dalambe notarihan'ny hetsiky ny tanora “20 Febroary” mpandàla ny demaokrasia.
Ho an'ny maro, ilay fitsidihana dia manamarika fanohanana midanadana ataon'i Frantsa ny fanavaozana maha-be resaka tarihan'ny Mpanjaka Mohammed VI. Ho an'ilay mafàna fo Rachid Droit, io dia miteraka fitsabahana amin'ny raharaha anatin'i Maraoka. Tsy miolankolaka ny hafany ho an'i Sarkozy :
Ny orinasa frantsay Alstom, izay nahazo ilay fifanarahana hametraka ilay TGV Maraokana, dia tafiditra anaty lisitra maintin'ny BDS campaign (Boycott, Divestment and Sanctions) hatramin'izy io nipongatra, tany amin'ny Janoary 2010 tany, hoe tafiditra tamin'ny tetikasa fanorenana zotran-dalamby tram tao Jerosalema ilay orinasa, nosainina hampitohy an'i Jerosalema Andrefana amin'ireo fibodoana tsy ara-dalàna ao anatiny sy manodidina an'i Palestina Atsinanana.
Betsaka amin'ireo resabe manodidina ilay tetikasa TGV no mikasika ny tombam-bidiny. Manoratra ilay bilaogera Omar El Hyani [fr]: